Ithini IBhayibhile Ngokutshaya?
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiBengali IsiBhulu IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitumbuka IsiCibemba IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKannada IsiKazakh IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKiluba IsiKimbundu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKrio IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLuo IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMaltese IsiMarathi IsiMaya IsiMongolia IsiMoore IsiNdebele IsiNepali IsiNgesi IsiNorway IsiNyaneka IsiNzema IsiOssetia IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUmbundu IsiUzbek IsiVenda IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZande IsiZulu isi-Igbo
INQAKU ELINGUMXHOLO | INDLELA UTHIXO AKUJONGA NGAYO UKUTSHAYA
UNaoko, ebekuthethwe ngaye kwinqaku elingaphambi kweli, emva kokuba ekwazile ukuyeka ukutshaya wathetha la mazwi: “Ndakwazi ukutshintsha ubomi bam ngenxa yokuba ndafunda ngeempawu zikaThixo nangenjongo yakhe.” Oko wakufunda eBhayibhileni. Nangona iBhayibhile ingathethi ngecuba, kodwa iyasinceda siqonde indlela uThixo akujonga ngayo ukutshaya. * Olo lwazi luncede abantu abaninzi bakwazi ukuzinqanda okanye ukuwuyeka lo mkhwa. (2 Timoti 3:16, 17) Makhe sithethe ngeengozi ezaziwayo ezintathu ezibangelwa kukutshaya nangoko kufundiswa yiBhayibhile.
Icuba linesona siyobisi sikhobokisayo esiyinikotini (nicotine). Esi siyobisi siyadlamkisa kodwa kwangaxeshanye siyadakumbisa. Ukutshaya kubangela ukuba inikotini ifike msinyane nangokuphindaphindiweyo engqondweni. Sihlandlo ngasinye umntu empakuza, ufunxa inikotini. Ngoko umntu otshaya ipakethi yecuba ngosuku ufunxa inikotini kangangezihlandlo eziyi-200, umlinganiselo omkhulu ngaphezu kwaso nasiphi na esinye isiyobisi. Yiloo nto ebangela ukuba inikotini ikhobokise kangaka. Xa sele ichewukile ingedle, iye inqanqatheke ize ilifune apho belikho icuba xa ingekatshayi.
“Lowo nizinikela kuye njengamakhoboka ukuze nimthobele, ningamakhoboka akhe.”—Roma 6:16
Ungakwazi na ukuthobela uThixo xa ukhotyokiswe licuba?
IBhayibhile isilumkisa isithi: “Anazi na ukuba lowo nizinikela kuye njengamakhoboka ukuze nimthobele, ningamakhoboka akhe ngenxa yokuba nimthobela?” (Roma 6:16) Ukuba umntu usoloko ecinga ngokutshaya, kungekudala uba likhoboka lako. Kodwa, uThixo ogama linguYehova ufuna sikhululeke, kungekuphela nje kwizinto ezenzakalisa imizimba yethu, kodwa nakwezo zonakalisa iingqondo zethu. (INdumiso 83:18; 2 Korinte 7:1) Ngenxa yoko, xa umntu efunda ngoYehova uye aqonde ukuba ufanele azinikele ngokupheleleyo kuye, ibe akanakukwazi ukuyenza loo nto ngoxa ezinikele kumkhwa oyingozi. Ukwazi oko kumnceda azimisele ukuxhathisa iminqweno eyingozi.
UOlaf ohlala eJamani uye wakwazi ukoyisa umkhwa wokutshaya weminyaka eyi-16 awawuqala eneminyaka eyi-12 ubudala. Uthi: “Ukuqala kwam ukutshaya kwakungathi yinto nje engenamsebenzi, kanti ndisukele endala ndicing’ ukuba lithole. Ngeny’ imini ndakhe ndaphelelwa licuba. Ndaqokelela zonke izitompi, ndaziqongqotha ndaza ndabopha yonke loo mvuthuluka ngephepha ndayitshaya. Xa sendiyicinga yonke le nto, yayiziintloni.” Wahlukana njani nalo mkhwa? Uthi: “Eyona nto yandincedayo ngumnqweno wam wokwenza izinto uYehova azithandayo. Uthando uYehova analo ngabantu nethemba asinika lona zandenza ndahlukana nalo mkhwa wokutshaya.”
UKUTSHAYA KUYINGOZI EMZIMBENI
IThe Tobacco Atlas ithi: “Isayensi ingqina ukuba . . . ukutshaya icuba kuyingozi kuwo onke amalungu omzimba ibe kuyagulisa, ekugqibeleni kubulale.” Siyazi kakuhle into yokuba icuba libangela izifo ezingosuleliyo njengesomhlaza, esentliziyo nesemiphunga. Kodwa ngokutsho kweWorld Health Organization (WHO), ukutshaya kungowona nobangela wokubulawa kwabantu sisifo esosulelayo iTB.
Ngaba uyamthanda yaye uyamhlonela uThixo xa ungcolisa umzimba wakho ngomkhwa omdaka?
NgeLizwi lakhe iBhayibhile, uYehova uThixo usifundisa ukuba sibuxabise ubomi, nemizimba yethu. UNyana wakhe uYesu wathi xa ethetha ngoku: “Uze umthande uYehova uThixo wakho ngentliziyo yakho iphela nangomphefumlo wakho uphela nangengqondo yakho iphela.” (Mateyu 22:37) Kucacile ukuba uThixo ufuna siyihlonele imizimba yethu size siphile ubomi obunenjongo. Njengoko sifunda ngoYehova nangezithembiso zakhe siye simthande size sizixabise izinto asenzele zona. Oku kusibangela singenzi nanye into enokungcolisa imizimba yethu.
UJayavanth, ongugqirha eIndiya watshaya kangangeminyaka eyi-38. Uthi: “Ndifundile ngeengozi zokutshaya kwiincwadi zempilo. Bendisazi ukuba kuyingozi oko, ibe bendizicebisa izigulane zam ukuba ziyeke ukutshaya. Kodwa mna ndandingakwazi. Ndazama izihlandlo ezihlanu okanye ezithandathu kodwa ndohluleka.” Uncedwe yintoni ke lo gqirha ukuze ayeke ukutshaya? Uthi: “Ukufunda iBhayibhile kundincedile ukuze ndiyeke. Umnqweno wam wokufuna ukuvuyisa uYehova wandinika amandla ndakwazi ukuwoyisa lo mkhwa.”
UKUTSHAYA KWENZAKALISA ABANYE
Umsi wecuba uyingozi. Ukuphefumla umsi wecuba kunokubangela umhlaza nezinye izifo kwabo bangatshayiyo. Nyaka ngamnye kubulala abantu abangatshayiyo abayi-600 000, uninzi lwabo ngabafazi nabantwana. Ingxelo yombutho iWHO ithi: “Asikwazi kukuphepha ukuphefumla umsi wecuba labantu abatshayayo.”
“Uze umthande ummelwane wakho njengawe siqu.” —Mateyu 22:39
Ngaba uyabathanda abamelwane nentsapho yakho xa ubaphefumlisa umsi wecuba lakho?
Ngokutsho kukaYesu, ukuthanda ummelwane—iintsapho zethu, abahlobo nabanye abasingqongileyo—kukwindawo yesibini ekuthandeni uThixo. Wathi: “Uze umthande ummelwane wakho njengawe siqu.” (Mateyu 22:39) Sakuba asilubonisi uthando lommelwane ukuba senza izinto ezibenzakalisayo abo basondeleyo kuthi. Uthando lokwenyani lusibangela ukuba sithobele esi siluleko seBhayibhile: “Ngamnye makafune, kungekhona ingenelo yakhe, kodwa eyomnye umntu.”—1 Korinte 10:24.
UArmen ohlala eArmenia, uthi: “Intsapho yam yandicenga ukuba ndiyeke ukutshaya kuba kwakuyenzakalisa oko. Kodwa ndandingafuni kuyivuma into yokuba ukutshaya kwam kunokuyenzakalisa.” Uchaza into eyamtshintshayo, esithi: “Oko ndandikufunda eBhayibhileni nothando lwam ngoYehova kwandinceda ndakwazi ukuyeka ukutshaya ndaza ndabona ukuba bekuyingozi, kungekuphela kum, kodwa nakwabanye abantu.”
XA SEKUNGASATSHAYWA NAPHAKADE!
IBhayibhile yanceda uOlaf, uJayavanth, noArmen bohlukana nalo mkhwa uyingozi owawusenzakalisa nabanye abantu. Abazange bayeke kuba nje besazi ukuba ukutshaya kuyingozi kodwa bayekiswa kukuthanda uYehova nokunqwenela ukumkholisa. Ukubaluleka kolu thando kuchazwe kweyoku-1 kaYohane 5:3 ethi: “Ukumthanda uThixo kuko ukuthi, siyigcine imiyalelo yakhe; kwaye ayinzima imiyalelo yakhe.” Kakade ke, akusoloko kulula ukuthobela oko kuseBhayibhileni, kodwa xa umntu emthanda kakhulu uThixo kuba lula ukuba amthobele.
Ngomsebenzi wokufundisa owenziwa ehlabathini jikelele, uYehova uThixo uye wanceda izigidi zabantu zakwazi ukuphuncula kumkhwa okhobokisayo wokutshaya. (1 Timoti 2:3, 4) Kungekudala, uYehova esebenzisa uNyana wakhe uYesu Kristu, uza kuzitshabalalisa ezentengiso ezibangele ukuba izigidi zabantu zikhotyokiswe licuba, baze abantu bafezeke.—Isaya 33:24; ISityhilelo 19:11, 15.
Ukuba uyasokola kwimizamo yokuyeka icuba, ungatyhafi. Xa umthanda uYehova uze ulijonge icuba ngendlela alijonga ngayo, uya kukwazi ukuphumelela kumzamo wakho. AmaNgqina kaYehova angakuvuyela ukukufundisa iBhayibhile. Qiniseka ukuba, xa ufuna uYehova akuncede uyeke ukutshaya, uya kukomeleza aze akunike amandla owafunayo.—Filipi 4:13.
^ isiqe. 3 Apha kubhekiselwa ekutshayeni icuba lokoqobo, nelinye elifunxwa ngemibhobho. Noxa kunjalo, imigaqo esiza kuthetha ngayo ibhekisela nakwicuba elihlafunwayo, igwada, neesigarethi ezisebenzisa umbane ezinenikotini, nezinye iintlobo zecuba.